Bannaanbixii ugu xoogganaa oo caawa ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Bannaanbixii ugu xoogganaa oo caawa ka dhacay Muqdisho
Bannaan-bixii ugu xooggana oo looga soo horjeedo Farmaajo, ayaa caawa ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Dibad-baxaal ka soo horjeeda Farmaajo ayaa caawa isugu soo baxay degmooyinka Cabdicasiis, Hodan iyo Holwadaag, waxayna si nabad ah u muujiyeen dareenka ay ka qabaan muddo kordhinta loo sameeyay hay’adaha Dowladda Fadaraal-ka ee waqtigu ka dhamaaday.
Isku soo baxyadaan oo ahaa kuwii ugu xoogganaa, dadkii ugu badnaana ka soo qeyb galeen ee Farmaajo lagu diidan yahay, ayaa caawa ka soo billowaday xaafadda Mirinaayada loo yaqaan ee ku taalla degmada Cabdicasiis, waxayna kusii fideen Xaafadaha Xararyaale, Shiirkole iyo qeybo kale sida Isgoyska Sanca, Jardiinka illaa Siinaay.
Dadka mudaharaadka dhigayay oo watay cod baahiyayaal, ayaa ku celcelinayay erayo ka dhan ah Farmaajo, oo ay ku muujinayeen diidmadooda ku aadan muddo kordhinta, waxayna siteen boorar ay ku xardhan yihiin qoraallo ay ka mid yihiin “Kaligi-taliye dooni meyno, Farmaajo ha dhaco, mudo kororsi dooni meyno, Farmaajo waa gacan ku dhiigle” iyo ereyo kale.
Goobaha ay inta badan ka dhacayeen isku soo baxyadaan, ayaa ah goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada diidan muddo kordhinta.
Xaaladda Muqdhisho ayaa caawa ka degan sidii xalay, waxaana hadda soo gabagaboobay bannaan baxyada oo muddo saacad ku dhow socday.